Traingbọ njem ndị njem okomoko na-aga n'isi nke Africa
Home » Ozi Njem Okomoko » Traingbọ njem ndị njem okomoko na-aga n'isi nke Africa
Vgbọ okporo ígwè ndị njem ụgbọ njem Rovos Rail nke a maara nke ọma dị ka mpako nke Africa, hapụrụ obodo azụmahịa nke Dar es Salaam na Cape Town na etiti ụbọchị na Tuesday, na-esi n'ụzọ dị ịtụnanya Tanzania na Zambia Railway Line gaa Cape Town na nsọtụ mpaghara Afrika.
Gbọ oloko ahụ, mpako nke Africa, hapụrụ isi obodo Tanzania n'elekere iri na abụọ nke mgbede, na-aga Cape Town, gafere Tanzania, Zambia, Zimbabwe, na Botswana tupu ha emetụ South Africa aka.
Mgbe ọ hapụsịrị Dar es Salaam, ụgbọ oloko ahụ gafere Selous Game Reserve, ogige nchekwa anụ ọhịa kachasị ukwuu na Africa nke metụtara ala nke 55,000 kilomita.
A awa ole na ole, ndị njem nleta n'ụgbọ okporo ígwè ahụ nwere ike ịlele ụmụ anụ ọhịa anya site na nyocha elere anya elere anya maka ịlele ebe ụgbọ oloko na-aga.
Udzungwa Ranges na Africa Great Rift Valley bụ ebe ndị njem nleta ndị ọzọ na-adọta ndị njem ụgbọ oloko iji nweta echiche. Gbọ oloko ahụ gafere Chisimba Falls na Zambia ebe ndị njem na-enwe ohere ile ọmarịcha ọdịda ahụ.
Mgbe ha rutere na Livingstone, ụgbọ oloko ahụ gafere akwa mmiri ahụ wee rute na ókèala Zimbabwe maka nnukwu nleta na Victoria Falls enweghị atụ na njem ọdịda anyanwụ na Osimiri Zambezi na njem njegharị si n'akụkụ mmiri gaa na họtel ahụ.
Oge ntụrụndụ na Victoria Falls gụnyere ọrụ ndị dị ka njem nke nnukwu ọdịda, helikopta na ọdịda, elephant-azụ safari, ịgagharị na ọdụm, ịkwọ ụgbọ mmiri ọcha, ịwụ elu bungee, na golf.
Ndị njem na-eme njem n'ụgbọ oloko ahụ, mgbe ha hapụsịrị Victoria Falls, na-enwekwa ohere ịga Hwange National Park tupu ha agaa Bulawayo, obodo nke abụọ kachasị ukwuu na Zimbabwe.
Na Botswana, ụgbọ oloko ahụ na-aga na ndịda site na Francistown na Serule, gafere Tropic nke Capricorn wee gaa n'ihu Mahalapye gaa Gaborone ebe ndị njem nleta na-apụ maka njem na Madikwe Reserve na ịnọ abalị abụọ n'ụlọ ezumike. Egwuregwu egwuregwu ụtụtụ, egwuregwu egwuregwu n'ehihie, na ihe omume ndị ọbịa ndị ọzọ na-egosi ụbọchị maka ndị njem nleta Rovos Rail.
Site na Madikwe Reserve na Magaliesberg Mountains, ndị njem nleta na-eji ụtụtụ egwuregwu n'isi ụtụtụ tupu ụgbọ oloko ahụ agaa ọzọ, na-agafe ugwu Magaliesberg, ugwu ugwu dị obere na-agbatị 120 kilomita ọwụwa anyanwụ-ọdịda anyanwụ site na Pretoria ruo Rustenberg na South Africa.
Kimberley Big Hole na Diamond Mine Museum bụ ebe mmadụ mere njem nleta mara mma nke ndị njem nleta na-akwụsị na ụgbọ oloko Rovos Rail na-eleta. Site na Kimberly, ụgbọ oloko ahụ gara Beaufort West na Matjiesfontein, obodo mara mma nke bara uru njem nleta.
Thegbọ oloko ahụ na-apụ Cape Town site na Touws River na Worcester maka nkwụsị ikpeazụ ya mgbe ọ gafesịrị ọkara nke kọntinent Africa na ụbọchị 15, na njem nlegharị anya nke ọkara nke kọntinent Africa iji mezuo "Nrọ nke Cecil Rhodes" - okporo ụzọ si Cape na Cairo.
Rogbọ okporo ígwè okomoko Rovos Rail na-eso ụzọ ụkwụ Cecil Rhodes si Cape, na-agafe na South Africa ruo Dar es Salaam ma na-ejikọ ndị njem ya n'akụkụ ndị ọzọ nke Africa site na netwọọdụ ụgbọ oloko ndị ọzọ dị na East Africa.
Ochie, Edwardian Rovos Rail ụgbọ okporo ígwè na-ejizi osisi nchịkwa 21 nwere ikike ịnabata ndị njem 72. Ndị nkụzi osisi ochie ahụ dị n’agbata afọ 70 na 100 afọ, ma tinyekwala ha n’ime ụgbọ ndị kwesịrị ekwesị.
Onye nwe Rovos Rail Company, ụgbọ oloko a mere njem mbu ya na Dar es Salaam na July 1993 iji mezuo ochicho Cecil Rhodes nke idobe uzo ugboala site na Cape Town na South Africa rue Cairo na Egypt, na-abanye na mpaghara Afrika site na n'ọnụ ọnụ ebe ndịda ruo n'ọnụ ọnụ ebe ugwu kọntinent a.
N’ile anya n’iru ndi Afrika Travel Association (ATA) Annual World Tourism Conference na Rwanda n’abia n’onwa na abia, Rovos Rail bu ebe ohuru na ebe ndi njem nleta n’abia nke Afrika. Rovos Rail guzobere dịka otu n'ime ndị mmekọ kachasị mkpa na uto njem njem n'Africa.
Na mmekorita ya na Rwanda Development Board, a na-ahazi ATA Congress nke 41 iji setịpụ ụda maka etu esi aga njem dị ka injin maka uto akụ na ụba na ọrụ ọrụ site na ụdị azụmaahịa ọhụụ, teknụzụ ọhụrụ, yana mmekọrịta mmekọrịta.
Ndị ọzọ karịa ụgbọ elu ndị a ga-egosipụta n'oge ATA Congress, Rovos Rail bụ onye ọhụụ ọhụrụ nke njem nlegharị anya bara uru na mkparịta ụka n'oge Congress, ebumnuche iji bulie pọtụfoliyo njem Africa gafee ụwa.
Lgbọ elu SriLankan na-ebupụta ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị site na Hong Kong ruo Colombo